.Kismaayo oo Si Weyn Looga Ciidey
.Kacdoon ka soo Cusboonaaday Muqdisho
.Madaxweynaha DFKMG oo Dib ugu Baqoolay Magaalada Baydhabo .
.Garowe: Afhayeenka Xisbiga Ramaas ee England oo la magacaabay.
.Xisbiga Ramaas oo ugu baaqay somaliada in ay xabada joojiyaan ciida fadligeeda.
.Sidee Looga Ciiday Magaalada Qardho
.Madaxweynaha Dowlada Federaalka KMG oo Saaka Markiisii Ugu horaysay kasoo degey Afgooye.
Sh. Shariif (dhexda) oo fadhiya goobtii lagu tukaney salaada ciida, Kismaayo, 30/12/2006: Sawirka: Reuters
Sh. Aweys oo jooga meeshii lagu tukanayey salaada ciida, Kismaayo: Dec 30, 2006. Sawirka: Reuters
Kismaayo oo Si Weyn Looga Ciidey
Waxaana Dadweynaha la hadlay Sheekh Shariif Axmed
Dec 30, 2006: Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa maanta si weyn looga ciidey, waxaana dad kunanaan gaaraya ay isugu soo baxeen fagaaraha garoonka kubbada ee Kismaayo.
Dadweynihii ciida ka soo qayb galay waxaa la hadlay Sh. Shariif Sh. Axmed oo halkaas ciida kula tukadey, isagoo sheegay in aan mowqifkoodii waxba iska bedelin oo ay diyaar u yihiin in Itoobiya ka saaraan dalka Soomaaliya, guushuuna ay Soomaalida ku dambayn doonto. Ummadda Soomaaliyeedna waxa uu ugu baaqay in ay midoobaan, diyaarna u noqdaan difaacidda Diinta, Dalka iyo Dalka.
Muqdisho oo Aan Laga Dareemin Ciidul Adxaa
Sabti: Dec 30, 2006: Maanta oo ah Ciid Al-Adxaa ayaa waxaa magaalada Muqdisho laga dareemin ciid, Ayadoo aan meelo badan oo magaalada ah laga oogin salaadii ciida. Waxaa dadku taas ku macneeyeen in magaalada ay haystaan Itoobiyaan, shacabkuna ay arrintaas aad uga caraysan yihiin.
Taariikh kooban ee Saddam Xuseen... Akhri..
Madaxweynaha DFKMG oo Dib ugu Baqoolay Magaalada Baydhabo .
Dec 30, 2006: Wararka Hada naga soo gaaraya degamada afgooye ayaa sheegaya inuu madaxweynuha DFKMG uu dib ugu boqoolay magaalada baydhabo ,kadib markii uu kulamo la qaatay waxgaradka ,Odayaasha iyo shacabka degamada afgooye, islamarkaana uga soo gudbay isla xaruntii hore ee jaamacada lafoole oo uu Halkaas ay isku arkeen Odayaal ka tegey Magaalada muqdisho ,xildhinaano ka tirsan dowlada oo iyaguna ka tegey magaalada muqdisho iyo wax garad kale.
Waxaan khadka telefoonka kula xiriiray masuulka xog haynta gaarka u ah madaxweynaha mud; Xuseen Cali ayaa ii xaqiijiyey inuu madaxweynuhu kulamo kula qaatay xaruntii hore ee Lafoole masuulyiin kamida Odayaal ,Ugaasyo ,waxgarad iyo mudanayaasha baarlamanka dfkmg ah oo uu kamid yahay Kadare ,xildhibaan Dhuxuloow iyo kuwo kale ,sidoo kalena waxuu cagta soo mariyey magaalada afgooye oo uu salaada kadib uu socod booqasho ah kusameeyey magalada afgooye islamrkana uu madaxweynuhu dib noqonayo magaalada baydhabo.
''waxuu madax weynuhu Booqasho ku samaynayey magaalada afgooye oo uu saaka salaada ciidda kula tukaday ,sidoo kalena waxuu kulamo la qaatay Odayaal ,waxgaradka iyo shacabka reer afgooye islamrkana waxuu hore aanu tagnay xaruntii jaamacada lafoole halkaas oo ay isku arkeen madaxweynaha kulamona ku wada qaateen Odayaal iyo waxgarad ka socday Magaalada muqdisho oo uu hogaminayey Cali Ugaas cali iyo Odayaal dhaqameedyo kale ,sidoo kale waxay isku arkeen lafoole masuuliyiin kamida mudanayaasha baarlaamaanka oo uu kamid yahay xildhibaan kadare ,dhuxuloow iyo kuwa kale sidoo kalena madaxweynaha waxay halkas isku arkeen wax garadka iyo aqoon yahaniinta ku sugan Lafoole'' ayuu yiri mud; xuseen cali .
Mar aan waydiiyey maxaa sababay Madaxweynuhu inuu iyadoo Villa soomaali shacabku reer muqdisho ku sugayaan inuu dib ugu laabto Lafoole ayuu waxuu iigu jawaabay '' waxaa jirta madaxweynuhu Marnaba uguma jirin safarkiisa inuu Maanta ku tago Magaalada Muqdisho ,islamarkaana waxaa uu muqdisho ku imaan doonaa Dhowaan safar la shaaciyey Hadii alle idmo '' ayuu yiri mud; xuseen cali .
Si kastaba ha ahaatee Madaxweynaha ayaa saacadihii nasoo dhaafay ka duulay magaalada Afgooye isagoo kusii jeeda xarunta Gobolka baay ee baydhabo oo ay waday Diyaaradaha Qumaatiga u kaca ee dalka itoobiya.
Madaxweynaha Dowlada Federaalka KMG oo Saaka Markiisii Ugu horaysay kasoo degey Afgooye.
Waxaa saaka Goor hore si lama filaana Uga soo degey garoonka diyaradaha ee magalada afgooye madaxweynaha dowlada dfkmg soomaaliyeed cabdlillaahi yuusuf axmed oo ay waday diyaaradaha qumaatiga u kaca ee itoobiya islamarkaana ay weheliyaan wafuud kale iyo ciidamadiisa ilaalada ee dowlada.
C/Laahi Yuusuf waxaa Afgooye keentay diyaarad Helikopter ah oo ay leeyihiin ciidamada Militeriga Itoobiya, taas oo ka soo qaaday Baydhabo.
Madaxweyne c/laahi yuusuf ayaa maalintii shalay kulan kula yeeshay xaruntiisa madaxtooyada ee Magaalada baydhabo wasiirka arimaha dibada ee xukuumada itoobiya asiyas muzfin islamrkana ay ka wada hadleen sida la sheegay sidii uu dalka ugu casuumi lahaa hogamiyayaal ka socda caalamka oo uu kamid yahay Hogaamiyaha itoobiya melez zanawi .
Sidoo kale Madaxweyne yuusuf ayaa wararka qaar sheegayaan inuu doonayo maanta inuu usoo gudbo magaalada muqdisho islamarkaana dadka kala hadlo xaruntii villa somali ee magaalada muqdisho . [waa intii aysan soo bixin wararka sheegaya dib ugu laabashadiisa Baydhabo]
Arintan ayaa kusoo beegmaysa maanta oo ay tahay ciida barakaysan ee ciidul udxaa oo ka duwan ciidihii Hore ee ka dhici jiray Magaalooyinka afgooye iyo muqdisho islamrkana aysan jirin wax dad ah oo maanta ku tukaday masaajidka weyn ee isabaahaysiga islaamka ee ku yaala magaalada muqdisho iyadoo loo aanaynayo ciidamada Tigreega oo ku Hareeraysan xarumaha u dhow dhow masajidka darteed aysan jirin dad ku tukatay halkaasi.
Si kastaba ha ahaatee ma jiraan wax sidoo kale farxadii ciiduhu lahaan jireen oo maanta ka muuqanaya magaalada afgooye iyo muqdisho iyadoo ay jiraana meelo dadku ay durba ka bilaabeen banaan baxyo yar yar oo laga yaabo inay weynaadaan oo ay kaga soo hor jeedaan ciidamada tigreega ee ku jira gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho.
Halkan Ka Daawo Video::: Bannaanbaxa Muqdisho ee Shalay looga soo horjeedey Tigreega
Garowe: Afhayeenka Xisbiga Ramaas ee England oo la magacaabay.
warqad ka soobaxday xafiiska Xisbiga mucaaradka ah ee ka jira Puntand oo loo yaqaano Ramaas political Part/ RPP ayaa lagu magacaabay afhayeenka xisbiga dalka England kaasi oo loo magacaabay sida ku cad warqada ka soo baxday xafiiska ramaas ee Garowe Sharmaake C/llaahi sidan ayayna u qornayn warqadasi.
Rpp/179/06 Garowe: 30/12/06
Ku: Sharmaake Cabdilaahi Leicester UK,
Ujeedo: Magacaabis afhayeenka xibiga Ramaas eedalka Engalnd
Markuu arkay barnaamijka guud ee xisbiga
Markuu arkay xeerka xisbiga
markuu arkay dastuurka DGPL
Markuu ogaaday jaaliyada ku nool England ee reer Puntland in ay danaynayaan afhayeen xisbgia Ramaas ee wadankooda.
Markuu la tashaday Gudiga fulinta ee xisbiga.
Waxaa lamagacaabay Mudane Sharmaake C/laahi oo loo magacaabay afhayeenka xisbiga Ramaas ee England.
Mudane waxaa lagaa codsnayaa in aad dhawrto qawaanmiinta xisbiga iyo rabitaanka shacab waynaha puntland.
Daahir C/qaadir muuse
Email: daahirciiro@hotmail.com Mobile: 002525747090
Xafiiska Xisbiga Ramaas ee Garowe
Garowe: Xisbiga Ramaas oo ugu baaqay somaliada in ay xabada joojiyaan ciida fadligeeda.
RPP:180/06 Garowe: 30/12/06
Ku: saxaafada madaxa banaan ee Somlia
Ku: shacabwaynaha Puntland
Ku: Guud ahaan shacabka Somaliyeed
Ujeedo: Ciid wanaagsan
Mudanayaal iyo marwooyin waxaan idin leenahay ciid wanaagsan waxaana ilaahay idiin ka baryaynaa ciidan ciideeda in aad ku gaadhaan nabad waarta iyo hiigsi horumarineed.
Waxaan umada somaliyeed ugu baaqaynaa meel kasta oo ay joogaan in ay xabada dhigaan wixii ka dhexeeyana ay ku dhamaystaan wadahadal.
Waxaan illaahay uga baryaynaa umda somaliyeed in ilaahay bogadooda isku mariyo burcad.
Waxaan kaloo idin kula talinaynaa meel kasta oo aad joogtaan in aad ku dayataan shacabwaynaha puntland oo meel iska dhigay xumaanta shacabwaynaha Somaliyeed una soo jeensaday hormarka Dalka.
Golaha xukuumada Federalka waxaan ugu baaqaynaa kooxaha ka soo horjeeda in ay leheshiiyaan wadahadalna wax lagu doono xabadana la joojiyo si loo gaaro nabad iyo horumar dhan walbaba leh.
Gudoomiyaha Xisbiga Ramaas daahir C/qaadi muuse
Email: Daahirciiro@hotmail.com mobile 002525747090
Sidee Looga Ciiday Magaalada Qardho
Sabti: Dec 30, 2006:: Dadweyne aad u badan ayna ka muuqatay farxad iyo bilicsanaan sare ayaa maanta iskugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee xarunta Gobolka karkaar ee Qardho si salaadda CIIDAL ADXAA ay ugu tukadaan goobtaas.
Dadkii salaadda ciida iskugu yimid ayaa iskugu hambalyaynayay sanadka cusub ee islaamka inuu noqdo mid horumar iyo nabad Soomaaliya u keena,waxa uuna imaamka ugu duceeyay wadamada islaamka ee dhibka ka jiro in ALLE ka saaro ayna helaan amaan iyo maamul wanaagsan oo ay kaga baxaan dhibaatooyinka.
Wadooyinka ayaa camirnaa oo iyadoo badankood shacabka ay muujinayeen ku faraxsanaanta maalinta ciidda.
dadweynihii ka soo qeyb galeen Salaada ciida waxaa ka dhex muuqday qaar ka mid ah Masuulyiinta gobolka Karkaar iyo degmada iyo qaarka ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka Puntland ,waxayna qaarkood u rajeeyeen Ummadda soomaaliyeed Nabad iyo barwaaqo in ay ka helaan sanadka cusub ee islaamka .
Ugu dambayntii dadweynihii Magaalada Qardho waxa ka la qaybsadeen farxaddda ciidal adxaa muslimiinta dunida caalamka waxayna u rajeeyeen nabad iyo caano.
Daawo Sawiradii Xilligii Maxkamaduhu Fureen Masjirka Weyn ee Muqdisho....
Warbahinta Caalamka iyo Soomaaliya::::
Kacdoon ka soo Cusboonaaday Muqdisho
Sabti: Dec 30, 2006: Maanta oo ah Ciid Al-Adxaa ayaa waxaa magaalada Muqdisho laga dareemayaa kacdoon looga soo horjeedo ciidamada Itoobiya ee xoogga ku soo galay dalka Soomaaliya. Waxaana meelo badan oo magaalada ah ka socda mudaharaadyo kacdoonkaas la xiriira. Waxaa taas dheer in aan qaybo badan oo magaalada ah maanta laga ciidin.
Waxaa wararku sheegayaan in maanta ay dhaceen bannaanbaxyo rabshado wata ay oo dadku ay tuurayeen dhagxaan ay shalay 29/12/2006 ka dheceen, iyagoo ku dhawaaqaya erayo ka dhan ah ciidanka Itoobiya ee ku sugan dalka Soomaaliya. Waxaana meelaha qaarkood lagaga soo waramay in la gubey calanka Itoobiya.
Marka la eego dareenka shacabka Soomaaliyeed iyo colaada soo jireenka ah ee gumeystaha Itoobiya, waxay xaaladda u muuqatey mid u eg in dalka oo dhan ay ka dhici doonaan kacdoon ballaaran, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ay hadda ciidamada Itoobiya ee ugu xoogga badani ku sugan yihiin. Waxaana warbaahinta qaar ka mid ah weriyeen in la arkayey dumar Soomaaliyeed oo mudaharaadka ka qayb qaadanaya kuwaas oo cunayey Hilib Ceeriin iyagoo ula jeeday in xabashida xilli sii horeysey sidaas loo baday in ay hilibka ceeriin cunaan.
Qof weydiistey in aan la magacaabin ayaa yiri: "Waxaa soo dhow ERYAAY ERYAAY, XABASHIDA ERYAAY, oo markaas ay dalka Soomaaliya caga caddaan uga bixi doonaan, jidka dheerna laga ugaarsan doono, inta ka hartaana iyagoo xiiqsan ku laaban doonaan guryohoodii".
Magaalada Muqdisho oo markii ay la wareegeen Maxaakiimta Islaamiga ah muddo lix bilood ah noqotay meel xasilan oo ammaankii, bilicdii iyo kala dambayntii kusoo laabatay ayaa maanta oo Maxaakiimtii ka maqan yihiin u muuqata meel faraha ka sii bexeysa.